Waa maxay iyo sidee loo sameeyaa guyo | Saadaasha Shabakadda
Inta lagu jiro ballaarinta badda, qaar ka mid ah qaababka biyaha hoostooda ayaa la soo saaraa. Sidii aan ku aragnay qoraal kale oo ku saabsan qulqulka badda, waa buuro dhaadheer. Xaaladdan oo kale waan ka hadlaynaa guyots Qaab dhismeedyadan juqraafiyeed waxaa lagu sharaxay mahadsanid aragtida ballaarinta badda
Ma rabtaa inaad ogaato waxa guyo-guyuhu yihiin iyo waa maxay hannaanka juquraafiyeed ee ay ku samaysan yihiin?
1 Qeexida guyots
3 Sidee loo sameeyaa?
4 Qiyaasta Guyots
Bada dhexdeeda waxaa jira qaabab badan oo juqraafiyeed oo la sameeyay sanadihii la soo dhaafay. Waa inaan xasuusnaano in qaababkani ay leeyihiin waqtigooda juqraafiyeed. Si kale haddii loo dhigo, kuma filna tobanaan sano ama qarniyo inay dhaafaan, laakiin waa malaayiin sano. Markii saynisyahannadu bilaabeen inay baaraan badda, waxay arkeen qaabab aad u xiiso badan. Waxay ku saabsan tahay guyots. Waa seamounts saqafkoodu fidsan yahay. Qaab-dhismeedkan qalaad wuxuu ka muuqanayaa dhammaan dabaqyada badda.
Seynisyahannadu waxay isku dayayeen inay sharraxaan sameynta guyots iyo saqafkiisa oo fidsan. Waxay gaareen go'aan ah, sannadihii la soo dhaafay, xoogga mawjadaha baddu way simi jireen. Gudaha badda iyo badaha sidoo kale nabaad guur ayaa ka jira. Maaha nabaad guur nuucaan oo kale ah oo laga yaabo inuu ku yaal dhulka dushiisa, webiyada iyo harooyinka, laakiin wuxuu ku dhaqmaa waqti ka dib.
Guyots waxay leeyihiin asalka foolkaane waxaana lagu arkay moolka ilaa 4000 mitir.
Sharaxaadda muujineysa samayska badahaan waxaa bixiyay saynisyahan Harry Hammond Hess. Saynisyahankan waxaa loo yaqaan mid ka mid ah aabayaashii aasaasay aragtida plate tectonics. Aragtida guud ee balaadhinta dabaqa bada waxa iska leh saynisyahankan. Wuxuu dhashay bishii Meey 1906 wuxuuna ku guuleystey inuu sharraxo xiriirka ka dhexeeya meelaha jasiiradaha, culeysyada cufnaanta badda, iyo peridotite-ka serpentine, iyo soo jeedinta ah in qaadashada marada dhulku ay tahay xoogga dhaqaajiya hawshan.
Markay ahayd XNUMX-meeyadii wuxuu helay diiwaanno badan oo ku saabsan badda. Waxyaabo badan oo lagu baran lahaa, wuxuu awood u yeeshay inuu si nidaamsan u muujiyo taxane ah qaabab la aqoonsan karo oo lagu dhex milmi karo karbaashyada dameerleyda. Waxay ahayd iskuxirka magnetka ee dhagaxyada oo ah shaqaynta aagga magnetka Dhulka. Maaddaama meeshan magnetka ah ay beddeleyso, wuxuu awooday inuu arko sida dhagxaanta qaarkood loogu agaasimay jihooyinka ka soo horjeeda kuwa koox kale. Tani waxay u horseeday inuu u maleeyo in baddu sii ballaaraneyso.
Thanks to guulahaas Hess, aragtida saxanka tectonics ayaa mar dambe la dhisi karaa 1968.
Hess wuxuu sharraxaad ka bixiyay sameynta guyootada. Jiritaankeeda waxaa sabab u ah waxqabadka volcanoes-ka ku jira xeebta badweynta. Marka volcano ay hawl yar tahay, wuxuu ka tagayaa walxaha waaweyn ee ku filan si ay u sameystaan ​​shaah
Dabaqa badda ayaa sii ballaaranaya oo ka tagaya qaababkan iyadoo volcano ay sii wadayso inay firfircoon tahay oo ka fogaato dhidibka cirifka. Markay Folkaanaha ka durugto jiirta, dhaqdhaqaaqa fulkaanaha wuu dhammaadaa wuuna qaboobaa. Cajiintu way sii dhumuc weynaataa. Guyot-ka ayaa la seexanaya qalabka intiisa kale, laakiin wuxuu dhex marayaa meelaha ay waxqabadka mowjadaha iyo mawjadaha badda ay baabi'inayaan kulankooda ugana tagayaan barxadda fidsan PWaxaa laga heli karaa ilaa 4000 mitir oo qoto dheer.
Qiyaasta aasaaska guyooyinka waa la xaqiijin karaa. Tani waa sababta oo ah haraadiga haraaga xayawaannada benthic ee ku nool meelaha moolka dheer laga helay. Waa la helay Guyots ee Afar-xagalka Afar, kuwaas oo ku jiray badda hoosteeda, mar uun ayaa la quusiyey.
Maaddaama heerka xuubka qolofku uusan joogto ahayn, waxaa jira kala duwanaansho muhiim ah. Waxaa jira guyots leh dherer kala duwan iyo diyaarad u gaar ah oo ah dhidibka wareegga. Geesaha guyooyinka waxay ka koraan wax ka yar inta kale.
Kala duwanaanshaha qaababkan waxaa laga heli karaa dhinac iyo dhinaca kale ee cirifka. Tusaale ahaan, saxanka Afrika wuxuu koraa 1,3 cm sanadkii, halka Waqooyiga Ameerika kaliya uu yahay 0,8 cm. Tani waxay keentaa in shaashadda ka samaysanta taarikada kaladuwan ay ku qaadato qaabab kala duwan. Waxa ay ka wada siman yihiin waa saqafka oo ay ku fiday ficil-celinta nabaad-guurka ee badda.
Haddii saqafka fulkaanaha uu sii jiro waqti dheer oo leh tallaabada nabaad-guurka ee hirarka, waxay noqon doontaa qaab ka duwan haddii ay ka yar tahay waqtiga. Waqtigani wuxuu kuxiranyahay xawaaraha uu saxanka qaaraddu kusocdayo halka guyo laga sameeyay. Waxaa la dhihi karaa waa kuwo aan ficil lahayn, fiiqan iyo fulkaano duug ah oo weli ah "taallo xusuus ah" oo ka mid ah badda. Intaas waxaa sii dheer, waxay bixiyaan macluumaad weyn oo ku saabsan da'da dhagaxyada iyo halabuurka iyo qaab dhismeedka badda laga soo bilaabo malaayiin sano ka hor.
Yantarnaya guyot waxaa sidoo kale loo yaqaan magaca guyot Amber oo tarjumaad Ingiriisi ah. Waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn badda oo dhan. Waxay ku taalaa Badweynta Baasifigga waxayna ka tirsan tahay Maraakiibta Gujisyada ee Sala y Gómez. Meesha ay ku dhowdahay waxay qiyaastii 150 km dhanka galbeed ka xigtaa Xeebta Zasosov.
Soo helitaankeeda waxaa lagu gaarey astaamo kale oo juqraafiyeed oo ka kooban gargaarka safka buuraha Sala y Gómez. Waxaa lagu ogaaday kalluumeysiga iyo baaritaanka badda ee Midowgii Soofiyeeti. Kooxdan saynis-yahannadu waxay dhowr jeer safarro ku soo mareen aagga gaarka ah illaa markabkii 18-aad ee markabkii saynis-ka ee Professor Shtokman uu soo helay gantaalka Yantarnaya inta u dhexeysa bilaha Maarso iyo Juun 1987.
Waxaan sidoo kale la kulmi karnaa xaddiga badda ee Anakena. Waxay caan ku tahay gargaarka badda dhexdeeda ee Badweynta Baasifigga, taas oo ka dhex muuqata Anakena Submarine Mountain Range, agagaarka Bariga Pacific Ridge, aag sidoo kale loo yaqaan "Rano Rahi Seamount Field".
Sida ay jiraan buuro caan ah oo ka mid ah gargaarka dhulka dushiisa, sidoo kale waxaa ku yaal berrinka badda. Macluumaadkan waxaad awood u yeelan doontaa inaad sifiican ufahamto waxkasta oo laxiriira guyots iyo tababarada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Waa maxay iyo sidee baa loo sameeyaa guyots?